Articles tagged 'laurent delahousse'
French businesses explore Zim opportunities 28 January 2015 HARARE - A French business delegation — including executives from multi-nationals Alstom and Bureau Veritas — was expected in Zimbabwe yesterday on a mission to explore investment opportunities. The business people, in the country for three days, are set to meet several government ministers an...
French firm eyes $10m revenue after Zim deal 1 August 2014 HARARE - European energy group Schneider Electric (Schneider) hopes to generate $10 million in revenue over the next three years following re-engagement with the Zimbabwean market. This comes as the France-based Schneider has partnered Zimbabwean firm, Samansco. The two on Tuesday signed an...
France to restore full ties with Zim 3 July 2014 MUTARE - France is optimistic about resuming direct co-operation with Zimbabwe by year end, a top envoy has said. French Ambassador, Laurent Delahousse was speaking at the handover of a state-of-the-art automated weather station at Mutare’ Fire Brigade yesterday. Delahousse praised what he ...
France to resume lending to Zim 18 March 2014 BULAWAYO - Direct government to government co-operation between France and Zimbabwe will resume before the end of the year, French Ambassador to Zimbabwe, Laurent Delahousse has said. Delahousse told a Zimbabwe Election Support Network (Zesn) post-election review conference in Bulawayo the d...